တောင်အာဖရိက နိုင်ငံ က ရေကာတာ နဲ့ ဆည်တွေ – SOUTH AFRICAN DAMS AND RESERVOIRS | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » တောင်အာဖရိက နိုင်ငံ က ရေကာတာ နဲ့ ဆည်တွေ – SOUTH AFRICAN DAMS AND RESERVOIRS
တောင်အာဖရိက နိုင်ငံ က ရေကာတာ နဲ့ ဆည်တွေ – SOUTH AFRICAN DAMS AND RESERVOIRS
Posted by Kyaemon on Jun 10, 2012 in Business & Economics, Education, Style & Beauty, Think Different, Travel |2comments
South Africa Dams
တောင်အာဖရိက နိုင်ငံရေကာတာ တွေလေ့လာ ရအောင်
ဝီကီပဒီးယား က ပုံ တွေ ပါ၊
နှစ်ပေါင်းများစွာကပင် လုပ်ထားတာဆိုလို့ ပိုပြီးတော့မှ အံ့ဩရတာပါ၊
အောက်ပါ Link လင့်ခ ကိုနှိပ်ရင် ဒီနိုင်ငံမှာ
ဒါတောင် စာရင်း “အချို့”ဘဲ ဆိုထားတာ၊
စာရင်းထဲက နံမယ်တခုချင်းကိုနှိပ်ပြီး ဒိထက်အသေးစိတ် လေ့လာလို့ရတာ၊
အချို့လဲ ဓာတ်ပုံတွေ ပါလာတာ၊
The following isapartial list of dams and reservoirs in South Africa.
In South African English (as well as Afrikaans)adam refers to both the wall as well as the reservoir or lake that builds up asaconsequence.
List of dams and reservoirs in South Africa
အောက်ပါ Link လင့်ခ ကိုနှိပ်ရင် ရေကာတာ ၁၈၇ ခု ရဲ့ စာရင်းကို
alphabetical အက်ခရာ အစီအစဉ်အလိုက်စီထားတာ၊
Category:Dams in South Africa
အောက်ပါ Link လင့်ခ ကိုနှိပ်ရင် ကျန်တဲ့ ရေကာတာ တွေ၊
အပန်းဖြေ စခန်းတွေ၊ အပျော်စီး သင်းဘော တွေကိုပါကြည့်နိုင်တာ၊
ရှူခင်းမျိုးစုံနောက်ခံထားတဲ့ ရောင်စုံဓာတ်ပုံတွေကဝေဝေ ဆာဆာနဲ့
အောက်ပါ Link လင့်ခ ကိုနှိပ်ရင်
ဒီနိုင်ငံ က ရေ နဲ့ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်တာကို
အခြေခံပြီး မိမိတို့ ရဲ့စားဝတ်နေရေး
ဒီလောက်များ တဲ့ရေကာတာ နဲ့ဆည် တွေ တောင် မလုံလောက် လို့
Economy of South Africa – Wikipedia, the free encyclopedia
Main article: Energy in South Africa
After unsuccessful attempts by the government to encourage private construction of power generation capacity, the state-owned power supplier Eskom started experiencing deficiency in capacity in the electrical generating and reticulation infrastructure in 2007. Such lack led to inability to meet the routine demands of industry and consumers, resulting in countrywide rolling blackouts. Initially, the lack of capacity was triggered byafailure at Koeberg nuclear power station, butageneral lack of capacity due to increased demand has become evident since then. The supplier has been widely criticised for failing to adequately plan for and construct sufficient electrical generating capacity, although ultimately the government has admitted that it is at fault for refusing to approve funding for investment in infrastructure.
The crisis was resolved withinafew months, but the margin between national demand and available capacity is still low (particularly in peak hours), and power stations are under strain, such that another phase of rolling blackouts is probable if parts of the supply are halted for whatever reason. The government and Eskom are currently planning new power stations, at cost to the South African consumer. The power utility plans to have 20,000 megawatts of nuclear power in its grid by 2025.
Main article: Water supply and sanitation in South Africa
Some predictions show surface water supply could decrease by 60% by the year 2070 in parts of the Western Cape.
The South African government planned to spend R69 billion on water infrastructure between 2008 and 2015. This involves building new dams and ancillary infrastructure, and repairing existing infrastructure. South Africa has an estimated total water capacity of 38 billion cubic metres, but will need 65 billion by 2025 if the economy is to keep on growing. The massive urban migration has placed further strain on the country’s ageing water infrastructure and createdalarge backlog.
ခုနေ က ဒီနိုင်ငံရဲ့တဦးချင်းဝင်ငွေဟာ
ယူအက်စ် $ ၇၁၅၈ (၂၀၁၀)၊ $ ၁၁၀၀၀ (၂၀၁၁)
ဆိုတော့ မြန်မာရဲ့ ၆ ဆ ကနေ ၁၀ ဆ ထိ ဖြစ်နေတာ
ရေနဲ့ရေအားစွမ်းအင်က တစိတ်တဒေသ ကြောင့်လား
လျှပ်စစ်စွမ်းအားရှိမှလဲ စက်ရုံသစ်တွေ လာ တည်ထောင်လို့ရမှာ၊
စက်ရုံဟောင်း စက်ရုံသစ် တွေမှာ အလုပ်သမား လဲ အလုပ်ရကြမှာ
ဆိုတာ “လယ်ပေါ်မှာ ဆင်သွားသလို ထင်ရှားလှ” တာပါ
$7,158 (2010) (nominal; 71st)
$11,000 (2011 est.) (PPP; 77th)
$94.21 billion (2011 est.)
gold, diamonds, platinum, other metals and minerals, machinery and equipment
China 13.7%, U.S. 10.1%, Japan 8.7%, Germany 7.3%, UK 7.1%,India 4.3% (2010)
$92.86 billion (2011 est.)
machinery and equipment,chemicals, petroleum products, scientific instruments, foodstuffs
China 13.4%, Germany 11.2%, U.S. 7%, Saudi Arabia 5.3%, Japan 4.7%, Iran 4.3%, UK 4.3% (2010)
တင်ပို့ကုန် နဲ့ တင်သွင်းကုန် နှစ် ဘက် စလုံး မှာ တရုပ်နိုင်ငံ က ရှေ့က ဖြစ်လို့
တောင်အာဖရိက နိုင်ငံရဲ့အရေးပါတဲ့ ကုန်သွယ်ဘက် လို့ ပြောနိုင်တာ
Kyae Mon has written 714 post in this Website..
အဲဒါလော့သိဝူးကွယ် ဒီနေ့ ရာဟူးသတင်းမှာ တက်လာဒါ ကြေးမုံဂျီးအမျိုးတဝမ်းကွဲ ထိုင်ဝမ်ကျွန်းမှာ ရစ်ခ်ျတာစကေး ၆.၅ အဆင့်ရှိ ငလျင်လှုပ်သွားသဒဲ့…။ အမယ်လေး ကြေးမုံဂျီးရဲ့ ကြောင်ကိုယူပါ တိုင်းပြည်ကိုဒေါ့ ချမ်းသာပေးဗာ…။
A strong 6.0-magnitude quake struck off Taiwan early on Sunday, US seismologists said, but no tsunami warning was issued.
The US Geological Survey said the quake hadadepth of 70 kilometres (40 miles) and hit around5am (2100 GMT Saturday), some 50 kilometres east of Su-ao in the northeastern Yilan county.
Taiwan’s Seismology Centre recorded the quake, which was felt in Taipei and islandwide, at 6.5 on the Richter scale. The Pacific Tsunami Warning Center did not issueawarning. The National Fire Agency said there were no reports of damages or injuries. Taiwan lies near the junction of two tectonic plates and is regularly hit by earthquakes.
In September 1999,a7.6-magnitude tremor killed around 2,400 people in the deadliest natural disaster in Taiwan’s recent history.
Dote Kha says:
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံက ဆည်တွေကတော့ အတော်ကောင်းကောင်းပဲ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်က ဆည်တွေထက် ပိုကောင်းတယ်။
ဆည်ပုံတွေက Wikipedia ဝက်ဘ်ဆိုက်က ပုံတွေလို့ ပြောပေမယ့် ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ပြန်တင်ထားတဲ့ ပုံတွေပဲ။ တကယ်ဆို အဲဒီလို မလုပ်ရပါဘူး။ ပုံရဲ့ Link ကိုပဲ ယူပြီး ဖော်ပြပေးရမှာပါ။